သင်၏ Android device မှအသိပေးရမည့်အပလီကေးရှင်းများ Androidsis ပါ
ဒီအချိန်တွေမှာ အသိပေးခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက်ပိုခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်မရ။ ဒီအတွက်ငါတို့မှာမင်းရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းတွေမှာ install လုပ်နိုင်တဲ့ application တွေအများကြီးရှိတယ်၊ စပိန်မှာ၊ ကမ္ဘာမှာဒါမှမဟုတ်မင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်ကိုအကြောင်းကြားနိုင်တယ်။
သတင်းမှားသို့ဆိုးရွားသောအန္တရာယ်ရှိနေသောကြောင့်အလွန်အမင်းအကြံပြုထားခြင်းမရှိသောအရာများသည် Twitter (သို့) Facebook မှတဆင့်သတင်းရယူရန်ရွေးချယ်သောသူများရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါတို့မင်းကိုဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပြမယ် ရာနှုန်းပြည့်သတင်းအချက်အလက်အသုံးချမှုသတင်းအေဂျင်စီများ၊ မီဒီယာ ...
1.2 20 မိနစ်
1.4 အယ်လ် Economista
1.5 BBC News,
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးသတင်းအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သော Reuters, ၏တရားဝင်လျှောက်လွှာဖြစ်သည် စာဖတ်သူများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်: "Reuters သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကွဲကြေသောသတင်းများနှင့်စပိန်၊ နိုင်ငံတကာ၊ စီးပွားရေးနှင့်ငွေကြေးသတင်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပံ့ပိုးပေးသည်။ "
Google Play Newsstand အက်ပ်အတွက်ရနိုင်သည် ဒီမှာ.
နာမည်တူဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာ၏တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမိနစ်၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများကိုပေးသည်။ သင်စီစဉ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးသတင်းများလက်ခံရရှိရန်အကြောင်းကြားစာများ သင်စိတ်ဝင်စားဆုံးအကြောင်းအရာများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ထုတ်ဝေမှုကိုမဆိုမှတ်ချက်ပေးပါ။ နောက်မှဖတ်ရန်သိမ်းပါ “ အကြိုက်ဆုံးများ၊ သတင်းကိုသင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်မျှဝေပါ။
၎င်းသည်သင်၏စမတ်ဖုန်း«ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမီဒီယာမျိုးစုံကိုပို့ဆောင်ပေးသောလုံးဝအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာသတင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အတင်းအဖျင်း၊ အားကစား၊ ဖက်ရှင်၊ စီးပွားရေးနှင့်အခြားအကြောင်းအရာရာပေါင်းများစွာ«။ ထို့အပြင်၎င်းသည် RSS feed aggregator တစ်ခုအနေနှင့်လည်းသင်စိတ် ၀ င်စားဆုံးသောအရင်းအမြစ်များကိုထည့်သွင်းနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။
News Republic သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုသိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာသည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုအလိုအလျောက်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေသည်
သူ့မှာအများကြီးရှိတယ် အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရပ်တည်ချက်များထဲတွင်
My News Digest: သင်စိတ်ဝင်စားသောမျက်မှောက်ရေးရာကို အခြေခံ၍ သင်၏နေ့စဉ်သတင်းအကျဉ်းချုပ် မင်းအတွက်နဲ့လုပ်ထားတာပါ။
ကိုယ်ပိုင်၊ သင်စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုရွေးပြီးသင်၏ home screen ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
In-depth: Tag Nav နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများကိုစူးစမ်းပါ။
ခေတ်ရေစီးကြောင်း - နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်အများဆုံးမှတ်ချက်ပေးသည်၊ ဖတ်ပြီးမျှဝေသည်။
အားကစားများ၊ အားကစားလောကအကြောင်းသတင်း၊ မဲများနှင့်ငြင်းခုံမှုများ (ဘောလုံး၊ ဘတ်စကတ်ဘော၊ ချန်ပီယံ၊ NBA၊ ဖော်မြူလာဝမ်း၊ MotoGP၊ လိဂ်၊ တင်းနစ်နှင့်အခြားအရာများ)
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများကိုကြည့်ရှုရန် High-resolution ဗီဒီယိုများ-အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာသတင်းများ၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ နည်းပညာ၊ အားလပ်ရက်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အတင်းအဖျင်း၊ ဖက်ရှင်နှင့်အားကစားများ။
ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများကို လိုက်၍ ယခုလတ်တလောအပူဆုံးအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေပါ
ကွန်မြူနတီ - သင်၏အကောင့်ကိုအခမဲ့ဖန်တီးပါ။ News Republic အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်အကြိုက်ဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကိုလိုက်နာပါ။ သင်၏စိတ်ကြိုက်သတင်းပရိုဖိုင်ကို ဖန်တီး၍ သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းသို့ပါ ၀ င်ရန်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုကိုဖိတ်ပါ။ News Republic အဆင့်၌သင်မည်မျှသွားနိုင်သည်ကိုရှာပါ။ သင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာလား။
မင်းရဲ့အရာကသတိထားရမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးနှင့်ငွေကြေးသတင်းများEl Economista ၏တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းသည်ဤကဏ္inတွင်အကောင်းဆုံးမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသန့်ရှင်းပြီးရိုးရှင်းသောစီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက်များသင်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည်။
- သတင်းကိုဖုံးကွယ်ခြင်း၊ စျေး ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကြေကွဲခြင်းသတင်းများ
- EcoDiario.es မှသတင်းများ
- EcoTrader ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အကြံဥာဏ်
- ငွေကြေး၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့်အတိုးနှုန်းများ Quotes
အင်္ဂလိပ်စာကိုသိသောသူများအားအသိပေးရမည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုသည်ဘီဘီစီကွန်ယက်၊ အလွန်ဂရုပြုဒီဇိုင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်နှင့်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
Pedro J. ၏နောက်ဆုံးဖန်တီးမှုဖြစ်သောနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ El Españolနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အဆုံးသတ်ခဲ့သည် မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဂျာနယ်လစ်တွေထဲမှာမရ။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များထဲမှ:
မျက်နှာဖုံးတွင်၊ ယခုဖြစ်ပျက်နေသောသတင်းများသည်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ မိနစ်တိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။
ရီယို - အဓိကသတင်းသစ်ကိုအထူးသဖြင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များတွင်သုံးရလွယ်ကူသည်။
ထုတ်ဝေမှု - ကျွန်ုပ်တို့၏အထင်ကရထုတ်ကုန် ညတိုင်း ၁၀ နာရီမှနေ့၏အဓိကသတင်းအပြည့်အစုံကိုဖွင့်ပါ။ ပိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့အောက်ခြေကိုသွားဖို့စံပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Android စက်မှအသိပေးရန်အချက်အလက်များ
Marce Lee (@Airsynth) ဟုသူကပြောသည်
Feedly (သို့) Tiny Tiny RSS ကဲ့သို့ RSS စာဖတ်သူကိုမမြင်ရတာဘယ်လောက်ထူးဆန်းလဲ။
Marce Lee (@Airsynth) သို့စာပြန်ပါ။
သင်၏ Christmas Lottery လက်မှတ်ကို TuLotero နှင့် ၀ ယ်ပါ။ အဖွဲ့လိုက်လုံခြုံစွာကစားပါ